Actorylọ ọrụ Ngwaọrụ ahụike, Ndị na - eweta - China Ngwaọrụ Ngwaọrụ Ngwaọrụ China
Ihe mbụ batrị 24V 13.5Ah Li-ion batrị maka Neonatal Incubator OEM & ODME
Anyị na-enye batrị 24V 13.5Ah Li-ion Rechargeable Batrị maka Neonatal Incubator OEM & ODME .A nwere ike iji ngwugwu batrị Neonatal Incubator, ahaziri iche wdg PLM ụlọ ọrụ nwere ndị ọkachamara na-ahụ maka njikwa mma, usoro ule zuru oke na nke zuru oke, sistemụ, ọrụ sayensị. Site batrị si abata ihe, mmepụta, Mbupu, ọrụ na ndị ọzọ na njikọ ike ịchịkwa, na-eso ISO9001: 2000 usoro chọrọ nkọwapụta, na-ekwe nkwa ngwaahịa mma. Ma gafere ISO9001: 2000, OA, ISO14001: 2004, RoHS, UL na ndị ọzọ certifications.And is our customers to Europe, Asia, Korea, America, Japan, Canada etc.Phere were onwe gị ịkpọtụrụ anyị mgbe ịchọrọ batrị. .
Ngwunye ụlọ ọrụ PLM 6Ah 18650 4S batrị nwere ike inyeghachi batrị LiB Li Li-ion
Anyị PLM ụlọ ọrụ 6Ah 18650 4S echebe PCB 14.8V Li-ion Rechargeable batrị.Iji batrị nwere ike iji ya na Monitor, ike ọkọnọ, ihe mgbapụta mmiri, onye na-achọpụta ihe na-enyocha Ultrasonic, Onye a na-anabata nke ọma wdg. Anyị bụ ndị na-emepụta batrị nwere ike ịnye ụdị ọkụ ọkụ lithium batrị Ukwu na anyị tumadi ahịa si Europe, Asia, Korea, America, Japan, Canada wdg Biko chere free ịkpọtụrụ anyị mgbe ị kwesịrị na batrị.
Factorylọ ọrụ PLM 2200mAh 18650 wuru n'ime PCB echebe 3.7V Li-ion Lithium 1S batrị nwere ike inye
Anyị na-enye ụlọ ọrụ PLM 2200mAh 18650 wuru n'ime PCB echekwara 3.7V Li-ion Lithium 1S batrị nwere ike ịdugharị ya. Enwere ike iji mkpọ batrị na Endoscope, Mini Fan, Flashlight, Torch, Ihe ụmụaka wdg. Anyị nwere ike ịme mkpọ batrị OEM & ODM ọrụ, biko nwee mmetụta. free ka anyị mara gị zuru ezu na ngwa na-arịọ arịrịọ.